ndingayenza i-logo ye-multicolor | Abadali be-Intanethi
Ndingayenza njani ilogo ye-multicolor
Iris Gamen | 02/04/2022 20:00 | Ukuhlaziywa ukuba 31/03/2022 13:32 | Amaqhinga
Umbuzo awakhe wajongana nawo wonke umyili kwinkqubo yoyilo, ngowuphi umbala ongawulahlwayo xa uyila uphawu, okanye enye indlela, yeyiphi imibala endiyidibanise nebrand yam.
Nokuba ufuna ilogo elula okanye eyona ibalaseleyo, kuya kufuneka ulandele iingcebiso ezisisiseko xa ukhetha imibala yohlobo. Kule post, siza kukuxelela ukuba zeziphi ezi ngcebiso kwaye Siza kukunceda wenze ilogo ye-multicolor, ukuba uphawu lundibuza.
1 Iintsingiselo zemibala
2 Inyathelo ngenyathelo multicolor logo
Intsingiselo enikezelwa kwimibala eyahlukeneyo esiyaziyo, lulwazi olunokusikhokela kwiinkqubo zokuphuhlisa uphawu.
Sele sisazi ukuba zikho izifundo ezahlukeneyo ngentsingiselo yombala, ezinye ziphumelele ngakumbi kunabanye. Kwaye oku kusikhokelela ekubeni sizibuze, ukuba ngokwenene siyikhetha kakuhle imibala yethu yohlobo okanye ukuba, ngokuchaseneyo, senza impazamo.
Ingcinga ekufuneka sicacelwe yiyo yileyo umbala awugqithisi iingcamango okanye iimvakalelo ngokuzimeleyo, kodwa uqukwa kwimeko ethile. Ezinye zeentsingiselo esizinika imibala zinokudibaniswa ngakumbi, umzekelo, kuyilo lwehempe kunye nesimo sengqondo somzekelo, kunokuba ngqo kumbala.
Ukwazi ukuba intsingiselo yombala ibandakanya umxholo, siza kwazi ukuba yeyiphi inqobo onokuthi uyiphumeze usebenzisa imibala eyahlukeneyo esiyaziyo.
Sonke siyazi ukuba lo mbala unamacala amahle kunye namabi.. Idityaniswe nothando, amandla, uthando, njl. Kodwa ngokuchaseneyo, ikwanxulumene neentlungu, igazi, ingozi, ubundlongondlongo, iintsingiselo ezimbi.
Umbala wesibhakabhaka nolwandle, ovuselela ukuzola, ubukrelekrele nobutsha. Inobuhle kwaye idlulisela ukuzithemba kunye nokutsha.
Lo mbala ifuzisela ukukhanya, inxulumene neemvakalelo zolonwabo, ubutyebi, amandla kunye namandla. Ngomnye weyona mibala ingaqondakaliyo, kuba ineentsingiselo ezimbi ezinjengomona, ukungcatsha, umona, njl.
Idityaniswa ne uchulumanco, ihlombe, amandla. Kwihlabathi lezentengiso kuthiwa ngowona mbala unethemba. Ukongeza, inxulumene nehlabathi lokutya, kuba iindawo zokutyela ezininzi ziyisebenzisa kwiilogo zazo.
Kwinkcubeko yaseNtshona inxulunyaniswa ne ukufa, intshabalalo, ukulahleka. Ngokuchasene noko, kwezinye iinkcubeko inxulunyaniswa nokuchuma, ubomi kunye nokukhula.
Umhlophe umele abasulungekileyo, abamsulwa, kuluntu lwasentshona. Ukongeza kucoceko, uxolo nobunyulu. Kwiinkcubeko zaseMpuma, ngumbala onxulumene nokufa.
La ulutsha, ukuzalwa ngokutsha, ithemba, kunye nokunxulunyaniswa ngokusondeleyo nokukhathalela okusingqongileyo. Ngumbala okhuthaza indlela yokuphumla enzulu.
Ukuba into ofuna ukuyimela yi ubuhle kunye nobugocigoci, imfusa iya kukunceda. Kwelinye icala, idla ngokunxulunyaniswa nemfihlakalo kunye nokomoya.
Umbala we ubumnandi, bobuntwana kunye nobumnandi. Kwinkcubeko yaseNtshona, ikwanxulumene nobufazi.
Ngokuxhomekeke apho sinxibelelana khona uphawu lwethu, eMpuma okanye eNtshona, imibala inokumela enye into okanye enye, sihlala siphinda, umxholo apho uboniswa khona.
Inyathelo ngenyathelo multicolor logo
Kodwa kuthekani ukuba uphawu lufuna ukwenza uphawu lwe-multicolor, kwaye asazi ukuba siyenze njani.
Into yokuqala ekufuneka usicacisele yona yeyiphi iphalethi yekhaphetshu ofuna ukuyisebenzisa., ukuba iya kuba yi-logo enemibala ye-rainbow, ukuba iya kuba yimibala eyahlukeneyo yombala ofanayo, ukuba iya kuba yi-gradient yombala, njl.
Kubalulekile ukwazi iintsingiselo zemibala xa ujongene neprojekthi entsha. Ekubeni ukuba uyazi ezi ntsingiselo, unokunceda umxhasi ekwenzeni izigqibo kwaye nokuba umkhokele kwindlela efanelekileyo, ukuba ulahlekile kakhulu okanye wenza izigqibo eziphikisanayo.
Wethu uphawu luza kuba yintsomi, yivenkile ye-ayisikrimu, ebizwa ngokuba yiMINIS, kwaye inikezelwe ngokukodwa kwi-ice creams kubantwana abancinci abanemilo yokuzonwabisa. Ngoko ke siya kufuna imibala eyonwabisayo, esondeleyo, sisazi kwimeko ekuyo ukuba isithatha ebuntwaneni.
El inyathelo lokuqala kukuvula uxwebhu olutsha kumzobi, kunye nemilinganiselo esiyifunayo, kodwa ngemvelaphi engenanto. Nje ukuba siyivulile, ibhrendi yethu iya kuba nelogo ye-calligraphic, ngoko ke siya kwibar yesixhobo kwicala lasekhohlo lesikrini kwaye ukhethe isixhobo sebrashi.
Xa sele siyikhethile, siqhubeka nokubhala igama lophawu lwethu kwi-canvas. Sele sinalo igama lenkampani elibhaliweyo, iMINIS, inyathelo elilandelayo liphinda, buyela kwibar yesixhobo se popup kwaye ufumane isixhobo sokumila kwaye ucofe kwisangqa.
Ukuba sele siyikhethile, siya kwenza le Usondezo oluphezulu olunokwenzeka kunobumba wethu wokuqala kwaye siya kudala i-ellipse elingana nendlela yebrashi, esibhale ngayo. Ngaloo ellipse, sizibeka kwindawo engezantsi ye-canvas yethu kwaye siyibeke inika umbala esiwufunayo okanye esiceliwe.
Kwimeko yethu, njengoko ubona, i-pastel blue tozo. Inyathelo elilandelayo khetha isangqa esisigqibileyo ukufaka imibala kunye nokugcina isitshixo solawulo+alt kwikhibhodi yethu. Siza kutsalela ekunene kweseyile yethu ukuyiphinda, sihlala sigcina umgca othe tye. Siza kwenza eli nyathelo imibala emininzi njengoko sinayo.
Wakuba unazo, uyakwenza nqakraza kwi W isitshixo kwibhodi yakho yezitshixo kwaye isikwere esincinci esinamachaphaza siza kuvela njengekhesa, esi sisixhobo sokudibanisa.. Ngolu khetho, siza kube sikhetha nganye yezangqa zethu ezinemibala. Ukwenza isiphumo senkungu enemibala emininzi.
Kubalulekile ukuba ezi zangqa zibe nombala wokuzalisa kuphela kwaye kungekhona umbala wendlela.kungenjalo umphumo awuyi kukulingana ngokuchanekileyo.
Sele sinento yethu yombala, siyikhetha ecaleni konobumba wokuqala welogo yethu. Siya kwibar yesixhobo ephezulu kwaye sijonge i izinto ithebhu, emva koko ukudibanisa kwaye ucofe kukhetho lokubuyisela umqolo. Njengoko unokubona imibala idibanisa kwileta.
Ukwenza okufanayo nabanye uneendlela ezimbini, okanye Khuphela kwaye uncamathisele lo mbala wombala njengonobumba abaninzi onawo okanye uphinda-phinda unobumba ngamnye ogqiba ngayo kwaye uyidibanise kwelandelayo. Sincoma ukhetho lokuqala.
Njengoko ubona ukwenza ilogo enemibala emininzi ayintsonkothanga kwaphela, eyona nto inzima kakhulu yinqanaba eliphambi koyilo, lophando lwexabiso le-brand kunye nomxholo walo, ngaphandle kwesi sigaba sangaphambili ilogo kunye nemveliso ayiyi kuqondwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Ndingayenza njani ilogo ye-multicolor
Ukusetyenziswa kwesithuba esimhlophe kuyilo lwegraphic
Imbali kunye nokuvela kwelogo ye-Unilever